Ururka TAF Oo Deeq Lacageed Gaadhsiiyey Guddida Horumarinta Togdheer | Somaliland.Org
February 27, 2008	Ururka TAF,ee fadhigiisu yahay cariga UK,ayaa maanta deeq lacageed gudoonsiiyay Gudiga Horumarinta Togdheer,oo iyagu gacanta ku haya dhismaha cisbitaalka Dimirka Burco.
Munaasibada loo sameeyay gudoosiinta deeqdan lacageed oo lagu qabtay xarunta Jaamacada ayaa waxa ka soo qaybgalay xubnaha gudiga horumarinta,Salaadiinta,madaxda jaamacda,Abwaan Hadraawi, iyo waxgaradka iyo aqoonyahano badan.
Suldaan Jaamac Nuux,oo ka socday Dhalinyarada Ururka TAF(Togdheer Abroad Foundation) oo isagu siday deeqdan lacageed ayaa ka warbixiyay ujeedooyinka Ururka iyo hawlaha uu qabto waxaanu yidhi “Ururkan waxaa laga asaasay wadanka UK sanadkii 2005kii,ujeedooyinkiisuna waa inuu ka shaqeeyo Arimaha Caafimaadka,Waxbarshada iyo Ciyaaraha”.
Mudadii gaabnayd ee ururku jiray waxa uu gacan ka gaystay dhismaha cisbitaalka dhimirka oo uu siiyay ,21,000$ ,jaamacada Burco oo ugu deeqay 40buug oo qaamuus afsoomali ah.
Suldaan waxa uu intaa raaciyay in ururku culayska saaray dhamaystirka cisbitaalka dhimirka ee togdheer,waxaanu ururka xubna ka ah 150 xubnood oo ku nool cariga ingirriska,sideed laamood ayuu ku leeyahay wadankaas,waxaanan mustaqbalka ku tala jirnaa inaanu laamo ururka ah ka sameyno wadanka.
Waxaanu ugu dambeyntii u mahadceliyay Gudiga Horumarinta togdheer iyo Abawaan Maxamed Ibaraahin warsame(Hadraawi).
Maxamed Xuseen aadan oo ka mid ah gudiga horumarinta togdheer oo gudoomay deeqdaas lacageed oo ka kooban 21,000,kun oo dolar ayaa ka warbixiyay dhismaha cisbitaalaka oo isagoo sheegay in cisbitaalkani yahay mid loogu talagalay dhalaanka iyo caruurta dadoodu tahay hal sano jir ilaa 25jir.
Waxa uu intaas ku daray,in cisbitaalkani ka kooban yahay laba qaybood oo kala qayb eegista ah iyo qayb dhigista ah,iyo deyr weyn oo ku xeeran,waxaana ku baxday lacag dhan 111.619,000kun oo dollar,dhaqaalahaas oo bankooda ay bixiyeen ayuu yidhi qurba joogu,siiba reer Uk.
Maxamed Xuseen waxa uu cadeeyay,in cisbitaalka la furidoono bisha Juun,ee sanadkan,isagoo xusay in hayad uu ka madax yahay nin reer Burco ahi oo jarmal ahi uu balan qaaday inay mudo afar sano ah gacanta ku hayndoonaan dawadiisa iyo kharshkiisaba.Waxaanu ugu dambeyntii u mahadceliyay Ururka Taf iyo cid kasta oo gacan ka gaysatay dhismaha cisbitaalkan.
Abwaan Hadraawi,oo isaguna munaasibadaa ka hadlay ayaa tilmaamay in bulshada ninba meel ay wax kaga dhaceenba,ma filayo xaqiiqdii in cidfayowbi “Nin waalan ayaa lagu yidhi waar waad ladnaatay beryahan,markaasuu yidhi maladnaane dadkii ayaa isoo gaadhay oo sidayda noqday”.
Abwaan Hadraawi,waxa uu intaa ku daray in dhibaatada ina haysata ay tahay mid aynu masuul ka nahay awal iyo aakhirba,oo diinteenu waa balaayo xijaab,balse hadaad gaalo ka jeclaato waad isku yaacaysaa oo buuqaysaa,xasiloonina heli maysid.
Isagoo Abwaanku sii faah faahinaya arimahaasna waxa uu yidhi “Maalin kasta ugu yaraan tobon qof ayaa ku biira suuqa waalida,walina dhibaatada ina haysata laysama odhan xalkeeda raadiya.
Waxaanu u si weyn ugu mahadceliayay qurbajooga Somaliland oo ku tilmaamay inay kaalinta ugu weyn ka qaateen horumarka adeegyada bulshada.
Waxa iyaguna munaasibadaa hadalo ka jeediyay Prof.C/salaan Yaasiin,Suldaan Maxaamuud Guuleed,iyo Sh.Cali warsame.